शरीरक सम्पर्क गर्नुभन्दा अगाडी भुलेर पनि झुक्किएर पनि नफेर्नुहोस् पिसाब ! « Sajha Page
शरीरक सम्पर्क गर्नुभन्दा अगाडी भुलेर पनि झुक्किएर पनि नफेर्नुहोस् पिसाब !
यौन सम्पर्क मानव जीवनको लागि निकै महत्वपूर्ण छ । तर यसलाई सुरक्षित र हानीरहित बनाउनु अझै त्यो भन्दा बढि महत्वपूर्ण हुने गर्छ । यौन मानिसको एउटा अनिवार्य शारीरिक आवश्यकता हो । यो आवश्यकतालाई पूरा गर्न वा यसलाई व्यवस्थापन गर्दा हामीले निकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा सानो सावधानी अपनाउँदा ठूलो समस्याबाट जोगिन सकिन्छ । सामान्य लाग्ने लापरवाहीले पनि हाम्रो शरीरमा गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्दछ । आज हामी तपाईहरुलाई कुनै पनि समय शारिरिक सम्बन्ध राख्नु अगाडी पिसाब फेर्दा हुन सक्ने संक्रमण बारे जानकारी दिन जाँदै छौँ।